ISpain ngaphansi kweqhwa: amazinga okushisa -8ºC ashiya imigwaqo engu-60 isikiwe | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - Laprensa.hn
Kubonakala sengathi bekungeke kufike, kepha ubusika ekugcineni buzinze eSpainFuthi ukwenze »ngendlela» engcono kakhulu: ngeqhwa neqhwa enyakatho yezwe futhi kubanda nakwezinye izindawo.
I-mercury kuma-thermometer ingehla iye kuma-degree ayisishiyagalombili ngaphansi kuka-zero, kubhebhethekisa isimo sokuthi bahlala emadolobheni afana neTeruel, Cantabria noma iBurgos.
Ubusika yisikhathi lapho, singeke sibuphike, bungashiya izindawo ezinhle kakhulu, kepha kufanele sizame ukuqaphela, noma ngabe sizothatha imoto noma uma sifuna ukugibela nje. Futhi kungukuthi, ngaphandle kokuqhubeka, esifundazweni saseTeruel bashiywe cishe yonke imigwaqo engahambeki. Ngaphezu kwalokho, enhlokodolobha bamise ukuthuthwa komphakathi futhi, ukuze bakwazi ukuzungeza emigwaqweni emikhulu, kudingeka amaketanga.
EMadrid, insizakalo yomugqa weCercanías C-9 phakathi kweziteshi zasePuerto de Navacerrada nezaseCotos nayo imisiwe ngenxa yeqhwa. Ngokwesinye isandla, e-Asturias kunabantu abangaphezu kwezinkulungwane eziyishumi abaphelelwe ugesi ngenxa yesiphepho, futhi banemigwaqo eyishumi nambili evaliwe ngenxa yezimoto.
Isithombe - Laregion.es
ECatalonia kunemigwaqo emine evaliwe, okuyi-GIV-4016, GIV-5201, C-28 ne-BV-4024. Njengokungathi lokho bekunganele, kuphoqelekile ukusebenzisa amaketanga emizileni engama-44, futhi abantu abangaphezu kuka-230 bayaqhubeka ngaphandle kokutholakala kukagesi edolobheni laseRibera d'Urgellet, eLleida.
Kepha akukho okuhlala njalo futhi lokhu okwesikhashana, kunjalo, futhi. Ngaphandle kokuthi namhlanje ngoLwesithathu kungena umoya obandayo kusuka enyakatho-mpumalanga yezwe laseYurophu, okuzodala ukuthi amazinga okushisa ehle abe ngaphansi kuka-10ºC ezindaweni eziphakeme zengxenye esempumalanga yezwe, ngoLwesihlanu isimo sizoqala ukujwayelekile. Kepha qaphela, ngeke kube isiqephu sokugcina esibandayo sonyaka.
Ngeminye imininingwane, sincoma ukuthi ufunde isaziso se- I-AEMET.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » ISpain ngaphansi kweqhwa: amazinga okushisa aze afike ku -8ºC ashiya imigwaqo engama-60 inqanyuliwe